Siyakhathala, liLizwe leeMihlali Ukuzibophelela kwezentlalo
Iqela leWorld of Amulets belisoloko libandakanyeka ekuzinikeleni kwezentlalo nasekuzinikeleni ekuphuculeni ubomi kunye neemeko zoluntu esihlala kulo. Nokuba kukuxhasa iiprojekthi zalapha ekhaya, ukucoca amahlathi kunye neelwandle, iiseshoni zasimahla ze-reiki, njl. Amalungu abonakalise umdla omkhulu kunye nenkxalabo kule micimbi.
Emva konyaka onzima kakhulu kuninzi lwenu ngenxa yobhubhane we-covid-19, siye sagqiba ekubeni sithathe ukuzibophelela kwethu ekuhlaleni. Nangona u-2020 ibingunyaka obunzima kwaye ucelomngeni nakuthi, sicinga ukuba, njengenkampani ephendula kwezentlalo, i-WOA ingenza ngaphezulu. Ke saqala ukukhangela eyona ndlela yokunceda uluntu lwethu ngeyona ndlela isebenzayo.
Ngenxa yezizathu ezininzi kunye neemfuno kunzima kakhulu ukufumana unobangela wokuxhasa (nangenxa yokusikelwa umda kwentshukumo ngenxa yobhubhane) ekugqibeleni sigqibe kwelokuba sixhase umbutho omnye ogubungela noxhasa izizathu ezininzi kwihlabathi liphela.
Sithetha ngowona mbutho ubalaseleyo ekuboneleleni: ILions Club yamanye amazwe. Siva ukuba ngeLions Club International Foundation (LCIF) singafikelela kubantu abaninzi apho kufanelekileyo (unokufumana ulwazi ngakumbi malunga neKlabhu yeeNgonyama apha)
Phakathi kwezizathu ezibangela ukuxhaswa kwe-LCIF kunjalo impendulo ye-covid-19, ukulwa nesifo seswekile, ukugcina ukubona, ukuxhobisa ulutsha, ukugcinwa kwendalo, nokunye okuninzi.
Kunyaka ophelileyo wezemali, i-LCIF yanikezela ngezibonelelo ezili-1,360, zizonke ngaphezulu kwe-US $ 41 yezigidi.
Kodwa le mali ifuna ukuvela kwenye indawo.
I-WOA igqibe kwelokuba iqale iprojekthi yenkxaso-mali ukuze izuze i-LCIF ngokunikela nge-1 € kwi-odolo nganye eyenziwe kwindawo yethu ukuxhasa izizathu zeLions Club Foundation. Ezi zizathu zingaba zendawo okanye zamazwe ngamazwe.
Ukususela ngo-februwari 1 2021 sizakuqala ukunikela ukuphela kwenyanga nganye i-1 € nge-odolo nganye eyenziwe kwiwebhusayithi yethu esemthethweni kunye neqonga le-Etsy lidityanisiwe. Esi sisiqalo nje kuba sifuna ukufikelela kwi-10% yomrhumo wentengiso ekupheleni konyaka. Yonke iminikelo izakupapashwa kweli phepha ukuze kubonakale kwaye kungaboniswana nayo kwiLions Club International.
Enkosi ngokuthenga kwiHlabathi lamaKhubalo kunye nokunceda abantu kwihlabathi liphela.
Ikhalenda yoNikelo 2021
Inyanga Isizathu umnikelo
EyoMdumba Umhlaza womntwana $189
EyoKwindla Iiklabhu zeNgonyama iValencia
UTshazimpuzi Usuku lomhlaba